Liistada qaybinta nidaamka lacag la’aanta ah | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | Qaybinta, Featured, GNU / Linux
SysV Init waxaa lagu badalay systemd de facto inta badan xilligan qaybinta GNU / Linux. Intii lagu gudajiray kala guurkaas, distros kale ayaa horeyba u doortay nidaamyo wax laga beddelay sida Upstart oo ku saleysan daemon, kaas oo ka jiray Ubuntu, ChromeOS, openSUSE, Debian, Red Hat, Fedora, iwm.
Nidaamka cusubi wuu ka dhib badan yahay nidaamyadii hore, wax aan si fiican ugu habboonayn falsafada Unix ee fulinta barnaamijyada fudud. Taas ka sokow, xaqiiqda ah inay ku hayso diiwaannada labalaabka ma jecla kuwa badan sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, waa in la yiraahdaa waxay fududaysay shaqooyinka qaarkood iyo inay sidoo kale leedahay faa'iidooyinkeeda. Si kastaba ha noqotee, wali ka careysiinaya isticmaaleyaal badan kuwaas oo wali doorbidaya nidaamka qadiimiga ah ...
Dhammaan kuwa raba inay ka cararaan nidaamka oo ay ku dhegan yihiin classic, waa inaad ogaataa inay jiraan waxyaabo badan oo hargab oo wali ka xor ah nidaamkan kale. Kaliya maahan Devuan (nooc kala duwan oo Debian ah oo aan nidaam lahayn ayaa caan noqday).
Halkan waxaan ku tusayaa xiiso leh liiska nidaamyada lacag la'aanta ah:
Devuan: asal ahaan waa Debian aan nidaam lahayn, oo "hal talaabo gadaal u socota" macno ahaan si looga takhaluso adeegsadayaasheeda nidaamkan cusub. Xaqiiqdii, magaceedu wuxuu ka yimid iskudarka ereyga Debian + VUA (Halyeeyga UNIX Admins).
Alpine Linux: waa mid kale oo ka mid ah qaybinta iyada oo aan nidaam lahayn oo aad ka heli karto. Waxay ku saleysan tahay musl iyo BusyBox, si ay u fududaadaan oo ay u badbaadaan.
artixlinux- Tani waxay ku biireysaa noocyada kala duwan ee jira ee ku saleysan Arch Linux. Qeybin si qumman u socota si dhakhso leh oo aan nidaam lahayn.
Fasax: waa mid ka mid ah qaybinta dhifka ah. Maaha fargeeto mid hore u jiray, laakiin waxaa laga sameeyay xoq, oo leh maareeyaheeda xirmo iyo iyadoo la adeegsanayo SysV init. Waa ikhtiyaar awood leh, laakiin ma noqon karto tan ugu fiican haddii aad raadineyso wax fudud oo aadan khibrad u lahayn. In kasta oo haddii aad rabto inaad isku daydo wax ka duwan, waa ikhtiyaar weyn.
Slackware: nooc ka mid ah linuxers "-duug" ah. Mid ka mid ah qaybinta ugu caansan uguna dhib badan, oo ay weheliyaan Gentoo iyo Arch. Laakiin sida kuwan oo kale, waa mid aad u jilicsan, awood badan oo aad ugu fiican kuwa isticmaala ee ka horumarsan. Xaaladdan oo kale waxay isticmaashaa nidaam qoraal oo qariib ah, ma aha SysV init, laakiin waa qaab BSD ah sida kuwa ay adeegsadaan qaar ka mid ah * BSDs.
Gentoo y funtoo: mid kale oo ka mid ah jahwareerka loogu talagalay dadka isticmaala khibrada badan dhibaatada ay leedahay awgeed, laakiin si isku mid ah cajiib ah. Distro-kani wuxuu kaloo iska fogeeyaa isticmaalka nidaamka Furan.
GUIX: mid kale oo ka mid ah qaybinta ka takhalusi nidaamsan, xaaladdan GNU Daemon Sherped waxaa loo isticmaalaa sidii nidaamka aasaasiga ah. Maaha wax sahlan oo la isticmaalo, waxayna isticmaashaa nidaam maareyn xirmo macaamil ganacsi.
AntiX Linux: mid kale oo ka mid ah nidaamka lacag la'aanta ah, oo ku saleysan Debian.
CRUX: waa jahwareer kale oo ku saleysan qoraallada qaabka BSD oo aad u fudud.
PCLinuxOS: Haddii aad jeceshahay hargabka 'Mandrake', markaa waa inaad isku daydaa fargeetadaas oo weli sii wadaysa meertada SysV.
Adelie Linux: mashruuc cadaalad ah oo dhalinyaro ah oo ujeedadiisu tahay in la ixtiraamo seddex tiir oo aasaasi ah oo ay ku tiirsan tahay: in gebi ahaanba POSIX la jaan qaado, iswaafajinta qaab dhismeedka badan, iyo dabacsanaan.
obarun: mid kale oo dheeraad ah oo ku saleysan Arch, oo leh waxaas oo dhan oo muujinaya, iyo sidoo kale in diiradda la saaro daahfurnaanta iyo fudeydka. Xaaladdan oo kale, waxay isticmaashaa nidaam qalaad oo loo yaqaan '6s' halkii laga heli lahaa nidaam.
Kiss Linux: magaceedu wuxuu horey u siinayaa fikrad waxa uu yahay, taasi waa, wuxuu raacayaa mabda'a KISS. Waa mashruuc madaxbannaan, oo laga abuuray ilaha, oo ay la socdaan BusyBox iyo nidaamkeeda bilowga ah.
LIISULKA- Looma tixgelin karo mid ka mid ah walxaha guud ee caadiga ah, laakiin way ka xor tahay nidaamka. Waxay ku saleysan tahay Gentoo waxayna u isticmaashaa laba ikhtiyaar bedel ahaan nidaamka: openRC ama s6.
Haddii aadan xirfad ku laheyn adduunka Linux ama aadan rabin dhibaatooyin, shaqsi ahaan waan kugula talinayaa taas waxaad doorbideysaa inaad la joogto Devuan… Haddii aad tahay isticmaale horumarsan ama aad rabto inaad isku daydo waxyaabo kale, waxaad xor u tahay inaad doorato mid ka mid ah kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Liiska nidaamka lacag la'aanta ah ee nidaamka
Waxaan u maleynayaa in sidoo kale lagu daro MXLinux maxaa yeelay asal ahaan kama shaqeynayso nidaamka, inkasta oo ay ku xiran tahay haddii qof u baahan yahay inuu ku bilaabo, laakiin waa in laga sameeyaa xulashooyinka horumarsan ee Grub oo loo beddelo gacanta isticmaalaha. .
Ku soo jawaab Senpai
Anigu shaqsi ahaan waxaan u isticmaalaa Artix la OpenRC, waxaan ku leeyahay seddex laab boot Arch (wali ma furin oo wali wey iga caawineysaa inaan isbarbar dhigo) iyo Windows 10 ciyaaraha.
Waxaan isticmaalaa OpenRC maxaa yeelay waxay umuuqataa mid qaan gaar ah, fududahay in la isticmaalo waxayna ila muuqataa inaan yeelanayo mustaqbal badan maadaama ay muujineyso in qaar kamid ah BSD ay sidoo kale isticmaali doonaan.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan haysashada Artix iyo Arch isla laptop-ka ayaa ah inaad isbarbar dhigi karto waxqabadka, waqtiyada bootka, iwm. Waxa aan dhihi karo ayaa ah in Artix uu Arch siinayo laad weyn waxkasta marka laga reebo daminta kumbuyuutarka oo xawaare ku socda Arch Guud ahaan wax walboo sifiican ayey u shaqeeyaan, xitaa Plasma si dhaqso badan ayey uga bilaabantaa shaashadda soo galida ilaa jawaabta ay ka muuqato Labadaba isku mid ayaan ka ahay laakiin hadaan ogaado in cusbooneysiin kasta oo systemka Arch ah ay kasii darayso, gaar ahaan waqtiyada bootada ee soo billowday sanad ilaa qaybtaan. Waa run in Intel patches (Meltdown, Specter, iwm) ay saameyn ku leeyihiin laakiin sidoo kale waxay saameyn ku yeelan lahaayeen Artix farqiga u dhexeeya midka iyo kan kalena waa mid aad u weyn.
Dib u eegis aad u wanaagsan ayaa ku mahadsan isbarbardhiggan.
Ka sokow, ku dar "Knoppix" liiska qaybinta iyada oo aan Systemd. Distro aad u dhameystiran haddii ay jiraan.
Ku jawaab G3O4
@ unodetantos mahadsanid ...
waa maxay farqiga u dhexeeya midka kale iyo kan ayaa ugu fiican iyo dhinacyada uu ku fiicanyahay.
Dhab ahaan way iskaga mid yihiin waxkasta marka laga reebo init. Waxay leeyihiin xirmooyin isku mid ah, dhab ahaan Arch repos (marka laga reebo xudunta) waxay ku yaalliin Artix laakiin feker ahaanteyda waxay u yihiin keyd ahaan keydkooda. Waan fahamsanahay inay qorsheynayaan muddada dhexe (haddii waqtiga iyo ilaha ay u oggolaadaan) inay si buuxda gacanta ugu hayaan keydka oo aysan sidaas ugu yeelan kuwa Arch qaabeynta. Waxaan qiyaasayaa in tani ay tahay haddii ay dhacdo inay ku tiirsanaadaan nidaam (tani waa fikrad shaqsiyeed) maaddaama ay gebi ahaanba baabi'iyeen wixii kale ee nidaamsan, ma heli doontid shim ama libsystemd-dummy ama wax la mid ah.
Amaanka, maxaa yeelay isla Arch, waxay kuxirantahay sidaad uhesho, waad heleysaa, in kastoo aadan nidaam laheyn, waxaa hubaal ah in ilaaliyeyaasha qeybaha kaladuwan ay arinta amni aad uga culustahay dadka nidaamsan sidaa darteedna waxaan u qaatay si aan iska dhaafey markaan fariistay in tan kaligeed ay ammaan tahay.
By habka, waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa baakadaha AUR dhibaato la'aan, Waxaan ku rakibay dhibaatooyin yar iyo eber.
Waxaa xusid mudan in nidaamka soojiidashada uu yahay S6, maahan 6S. Marka laga hadlayo Artix, waxay bixisaa 3 nooc oo leh kala duwanaan kala duwan: openrc, S6 iyo runit.
SEGA waxay rabtaa inay ka soo ceshato mashiinadeeda Arcade-ka "digaaga"